Mr. Sander Mager, Managing Director of AgriProFocus presented about the strategy of AgriProFocus related with linking, learning and leadership and encouraged all the participants to participate actively to make the networkasuccess. He pointed out to the participants that not only “we areanetwork, but you are the network."
Ms. Bente Meindertsma , AgriProFocus Myanmar Country Coordinator explained about the Myanmar network priorities for 2018. To reach our goals, we will cooperate with the Myanmar Agricultural Network onastrategic level. Asafirst important step, our Country Coordinator and the MAN coordinator signedamemorandum of agreement to jointly support the development of the Myanmar Agriculture sector and also strengthening Dutch participation in this process.
We boosted active participation and asked for input for our 2018 priorities by facilitating group discussions with three topics related to inclusive agribusiness: Youth in agribusiness, Farm-firm relationships and Access to finance. The participants enthusiastically discussed and found new partners working on the same themes. They developed innovative ideas by brainstorming with each other.
Do you want to know more about one of the topics, or would you like to discuss ways to collaborate in the network? You are always welcome to pass by foracup of coffee or drop usaline.
We invite all of you to actively engage in the Network. Keep in touch!
There will beafull report about the network day soon.
AgriProFocus မြန်မာ၏ ပထမဦးဆုံး Network Day အခမ်းအနားတွင် AgriProFocus နှင့် MAN အကြား နှစ်ဦးသဘောတူ စာချွန်လွှာရေးထိုးခြင်း၊
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၉ရက်နေ့တွင် ကျွနိုပ်တို့ AgriProFocus မြန်မာ ၏ အလုံးစုံပါဝင်သော လယ်ယာစီးပွားရေး ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး Network Day ကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရေအတွက်အားဖြင့် ၅၀ ကျော်သော လယ်ယာစီးပွားဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ကို ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်သံအမတ်ကြီး HE. Wouter Jurgens, မှ အခမ်းအနားကိုတက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီး အနေဖြင့် “ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လယ်ယာအစားအစာကဏ္ဍကို ဆန်းသစ်ထွင်နိုင်ရန်အတွက် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။” “ ဒီနေ့တစ်နေ့တာ၊ မနက်ဖြန် နှင့် သန်ဘက်ခါအတွက်တင် ကျွန်တော်တို့က သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖြစ်တည်ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်လုပ်ဆာင်နိုင်ဖို့အတွက် သင်တို့နဲ့အတူ မိတ်ဖက်အဖြစ်ရှိသွားမှာပါ။ AgriProFocus အနေဖြင့်လည်း ဒီအရာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရောက်ရှိနေတာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
AgriProFocus ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ(MD) ဖြစ်သော Mr.Sander Mager မှ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့် ဦးဆောင်မှုတို့နှင်ပတ်သက်သော AgriProFocus ၏ နည်းဗျူးဟာကို တင်ပြခဲ့ပြီး၊ တက်ရောက်လာသူများကို အောင်မြင်မှုရရှိသော Network တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြရန် အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “ ကျွန်တော်တို့တင် Network အဖွဲ့တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လည်းပဲ network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” လို့ တက်ရောက်လာသောသူများကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါသည်။
AgriProFocus ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညှိုနှိုင်းရေးမှူး ဖြစ်သော Ms. Bente Meindertsma မှလည်း မြန်မာချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်တစ်ခုအနေဖြင့် ၂၀၁၈ တွင်ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမည့် အရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွနိုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ့ဖို့အတွက် မြန်မာ စိုက်ပျိုးရေး ကွန်ယက် (MAN) နှင့် အတူ မဟာဗျူဟာအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်များ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ ပထမဆုံးအရေးကြီးသော ခြေလှမ်းအနေဖြင့်ကျွနိုပ်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညှိုနှိုင်းရေးမှူးနှင့် MAN ၏ ညှိုနှိုင်းရေးမှူး တို့ အတူ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရန် နှင့် ဒတ်ခ်ျ တို့၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ဖြစ်စဉ် တွေပါ အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာရေးထိုး ခဲ့ကြပါသည်။ မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
အလုံးစုံပါဝင်သော လယ်ယာစီးပွာရေးကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် ခေါင်းစဉ် ၃ ခုဖြစ်သော လယ်ယာစီးပွားမှ လူငယ်များကဏ္ဍ၊ လယ်ယာနှင့် ကုမ္ပဏီကြားဆက်ဆံရေး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ စသောခေါင်းစဉ်များနှင့် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် ကျွနိုပ်တို့၏ ၂၀၁၈ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် အထောက်အပံ့များစွာရရှိခဲ့ကြသည်။ တက်ရောက်လာသူများမှလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တူညီတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အသစ်များကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အချင်းချင်း အဖြေထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် ဆန်းသစ်သောစိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
သင့်အနေဖြင့် ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား သို့မဟုတ် ကွန်ယက်မှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ဆွေးနွေးလိုပါသလား။ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရင် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ သို့မဟုတ် လိုင်းပေါ်ကနေပဲဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ိုပ်တို့၏ ကွန်ယက်အတွင်းမှာ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Network day အတွက် အစီအရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို လည်း မကြာခင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။